Itwetwe kunyamalala uDJ okubikwe ukuthi uboshiwe
U-DJ Kotini okungaqondakali ukuthi uboshelwephi yize kuthiwa uthathwe ngamaphoyisa ase-Eastern Cape Isithombe: ESIGCINIWE
Nqobile Masimula | June 12, 2022
SEKUQUBUKE ukukhathazeka ngokungatholakali kukaDJ Kotini, obekubikwa ukuthi ushaqwe ngamaphoyisa ase-Eastern Cape kodwa okungaveli ukuthi amthathe amyisaphi.
Abasondele naye nabasendimeni yomculo bathi sebehluleke bancama ukuthola okuqhubekayo nokuthi uvela nini lapho aboshwe khona.
Omunye ongathandanga ukudalulwa igama, uthe bakhathazekile manje ukuthi bazolokhu becabanga ukuthi uthathwe ngamaphoyisa kanti sekukhona okumehlele.
“Sonke sikhala esifanayo ukuthi uKotini akasathinti ngisho umuntu oyedwa, asho ukuthi ugcinwephi nokuthi uvela nini. Sikhathazekile ngoba sinqindeke amandla ngisho ukumsiza uma singamazi nokuthi ukuphi,” usho kanje.
Ngokuthola kweSolezwe ngeSonto amaphoyisa athe ambophela icala lokudlwengula nokuthumba elavulwa ePort Elizabeth.
Kuthintwa uBrigadier Thembinkosi Kinana, okhulumela amaphoyisa ase-Eastern Cape, uthe kunzima ukuthola umsolwa ngegama lakhe nje kuphela njengoba beneziteshi ezingu-27. Ucele ukuthunyelwa inombolo yecala noma igama lesiteshi okwavulwa kusona icala, okuyizinto ezingaziwa muntu ngisho abasondelene noDJ.
Phambilini bekubikwe ukuthi uKotini, onguSiyabonga Zikode ngokuzalwa, uboshelwe amacala okushushumbisa izidakamizwa benelungu leBig NUZ, uDanger.
Elinye iphoyisa lasePort Elizabeth elingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba liveze ukuthi selihlukele ngisho selibheka ophikweni lweFamily & Child Protection kodwa lutho ukumthola.
“Kuzomele kubhekisiswe kahle ukuthi kwakungamaphoyisa ngempela yini lawa amthatha ngoba ukube kwakuthunyelwe abaseshi eKZN ngecala elithile ngabe kuyavela,” kusho iphoyisa.
Ngokuthola ngomthombo ongashayi eceleni futhi osondelene neSolezwe ngeSonto, icala lavulwa ePort Elizabeth lapho namaphoyisa abesuka khona athathe uDJ.
“Inqwaba yamaphoyisa abembheka engamtholi izinsuku ezintathu, agcine emthola emzini wakhe eManzimtoti. UDanger kuthiwa ugaxele lapho ngesikhathi eficwa yilawo maphoyisa. Kwathi uma emsesha athola izidakamizwa ephaketheni. Waboshwa kanjalo naye,” kusho umthombo.
Umthombo usola ukuthi uDJ (obengazi ukuthi kunecala avulelwa lona) waziqhatha nommangali emuva kokunqaba ukumnika imali emva kokuhlala naye isonto lonke.
“Kuthiwa le ngane wayebuye nayo ePE, bahlala isonto lonke nayo. Ngisola ukuthi baxabana ingane isigoduka njengoba kungathi yamcela imali, walandula. Waphinde wathela usawoti esilondeni ngokuyigibelisa itekisi isigoduka, ekubeni ingane mhlawumbe yayisizibona itetemuka ngebhanoyi uma isiphindela emuva,” usho kanje.
Uthe kufuze ukuthi ingane yayisizibonele umuzi omkhulu osesilungwini, namaloli kamsolwa, yezwa nokuthi unamabhizinisi, yazitshela ukuthi izogoduka ibomvu yimali.
Izolo indawo yokudlela kaKotini esenkabeni yeTheku, iNkonzo’s Kitchen, ibisebenza njengokujwayelekile yize umnikazi wayo kukholakala ukuthi usezikhindini.
Ucingo lukaKotini belungangeni kodwa kuzwakala umsindo okungathi lumatasa, okuyinkomba yokuthi luvaliwe.